BUDDHIST TERMS' Dictionary: EVERLASTING CHARITY - ထာဝရပုည
EVERLASTING CHARITY - ထာဝရပုည
EVERLASTING CHARITY Thᾱvarapuñña
ထာဝရပုည - ထာဝရကုသိုလ်။
အမြဲတမ်း ကုသိုလ်ဖြစ်နေသော ဒါနခြောက်မျိုးကို ထာဝရပုည - ဟုခေါ်သည်။
(၁) အာရာမရောပဒါန - ပန်းဥယျာဉ် သစ်သီးဥယျာဉ် စိုက်ပျိုးလှူဒါန်းခြင်း၊
(၂) ၀နရောပဒါန - အရိပ်ရပင် စားသုံးပင်များ စိုက်ပျိုးလှူဒါန်းခြင်း၊
(၃) သေတုကာရကဒါန - တံတားခင်း လမ်းဖောက်၍ လှူဒါန်းခြင်း၊
(၄) ပပါဒါန - ရေချမ်းစင်တည်၍ လှူဒါန်းခြင်း၊
(၅) ဥဒါပါနဒါန - ရေတွင်း, ရေကန်, ရေမြောင်း တူး၍ လှူဒါန်းခြင်း၊
(၆) ဥပဿယဒါန - ကျောင်းကန် အဆောက်အအုံ လှူဒါန်းခြင်း။
Charity whose merit lasts forever
The six kinds of charitable act that have everlasting benefits are called everlasting charity.
(1) Setting up gardens and orchards for public use, ᾱrᾱmaropadᾱna.
(2) Planting shady trees and fruit trees for public use, vanaropadᾱna.
(3) Building roads and bridges for public use, setukᾱrakadᾱna.
(4) Providing drinking water at the wayside, papᾱdᾱna.
(5) Constructing wells, tanks and ditches as means of public water supply, udapᾱnadᾱna.
(6) Donation of monastic dwellings, etc., upassaya dᾱna